Ndeipi email ine pfupi uye yakagadzikana iwe yaunofunga nezvayo? | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Ndeipi email ine pfupi uye yakagadzikana iwe yaunofunga nezvayo?
Pamaseva akakurumbira etsamba, zvino zvava nyore kunyorekodha chimiro chisina kuiswa uye wochinyora pese paunenge uri. Idzi rezita rekunyorera resavhisi harisi nyore nyore kurangarira kupfuura rakasarudzika hunhu.
Kana kutsvaga seva nyowani yemahara isati yakwidziridzwa uye wotanga bhokisi rezvinyorwa rine zita pfupi uye rakanaka ipapo.
Kwandiri, iyo inonyanya nyore email ndiyo zita uye surname. Iwe unogona kuigadzira iyo yakazara kana yakapfupiswa capital mavara maviri. Izvi ndezvekushandisa pachako.
Если собираетесь емайл делать для работы, то полное или honey agaric же сокращенное название предприятия. Если для других дел нужна почта, то лучше придумать название связанное с этим родом деятельности, так и вам будет проще и пользователям.
Kana iwe usingade manhamba, saka sarudza chete kusarudzwa kwemavara, usingavimbe nemazwi sezvo iwe usingakwanise kuwana emahara mazwi, Zuva rinowanzobatikana. Huyai nechinhu chakadai: [Email akadzivirira], [Email akadzivirira], [Email akadzivirira] etc., zvekuti zvipfupi asi zvakasununguka. Imwe yemakero aya, nenzira, ndeyangu chaiyo uye ndakaitanga kwete kumwe kunhu, asi pa @ gmail.com neimwe nzira nenzira inoshamisa vakaiwana iri pfupi uye yemahara.
Zvakanaka, zvinoenderana nezvaunoda. Kana semuenzaniso wekutaurirana, saka yekutanga 2 mavara ezita uye surname anogona. Semuenzaniso, Ivan Petrovich [Email akadzivirira]kana idzi dzakabatikana unogona kuwedzera nhamba dzekuzvarwa [Email akadzivirira] Uye kana iri yebasa, zvino zvinoenderana nehukuru hwebasa. Kana uchinyora zvinyorwa saka zakazstat (uye chero nhamba kana iri busy).
Iye zvino dzinenge dzose mazita akareruka emabhokisi ematsamba akavhara, saka unofanirwa kubatanidza mavara nenhamba. Rega zita reemail rizivikanwe kwauri, semuenzaniso, quot; Tankquot ;, uyezve nekubatanidzwa kwehuwandu iwe hwauchazonyatso kuyeuka, semuenzaniso, zuva rekuzvarwa kwako.
Kana kunyora izwi rimwe chete iro kakawanda.
Idzo sarudzo, sokwadzo, dzakawanda, zvekuti Email ipfupi uye yakakodzera kunyorera kune vamwe vanhu uye nekurangarira nekuzvinyora iwe pachako. Vazhinji vanoedza kushandisa musanganiswa wetsamba wezita rezita, zita nenhamba zvakabatana nekuzvarwa kwevavo kana vepedyo vanhu. Semuenzaniso, zita remushandisi ndiEgorov Peter 1977 gore rekuzvarwa.
Zvinoenderana neruzivo rwaunoda kuisa kero yako. Ndokunge, kana iwe uchida kuti vanhu vanzwisise zera rako uye zita nekutarisa iyo email, saka unofanirwa kunyora zita uye gore rekuzvarwa, semuenzaniso. Kana iwe uchida kutaurira nyika neguta rekugara, saka iwe unogona kudoma zita rakapfupiswa, senge quot; spbquot; kana quot; mskquot ;. Iwe unogona chete kutora yekutanga, uye kana ichinzwika seyakajairika, ita kero inonakidza kubva kwavari. Mune yangu kesi, semuenzaniso, yaizoverengera qu ;;ququot;, inoverengwa uye inonzwisisika.
Chero ipi email kana email yaunotanga kuuya nayo, iyo system inotanga kupa sarudzo (uye pane sarudzo dzemahara dzinogona kunyoreswa pasina kugadzirisa).
Kazhinji, iyo email izita rekupedzisira kana zita rekutanga muChirungu uye gore rekuzvarwa kana zera:
Tichifunga kuti kero dzakadai dzinogona kugarwa, mamwe mavara anogona kuchinjwa, uye dzimwe nhamba dzinowedzerwa.
Mazhinji mareja akavakirwa pane data raunozadza rinopa sarudzo dzezita rinogona kutumirwa retsamba yako. Semutemo, idzi sarudzo dzakanaka dzekuyeuka uye dzinogara dzakasununguka mazita. Zvakanaka, seimwe nzira, iwe unogona kutora mavara ekutanga emashoko ehurukuro yako yaunofarira kana vhesi.
Muchokwadi, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekusarudza yako email, asi kuti ichipfupika iwe unoda basa shoma uye nekuda kweizvi iwe unofanirwa kushandisa zvakanyanya izwi rako rinowanzogara iro raunoshandisa kazhinji, saka hauzozvikanganwa. Edza yako yekutanga yakapfupikiswa uye yekupedzisira zita.
Mibvunzo ye61 mu database yakagadzirwa mu 0,282 masekondi.